Nutrition - ebalulekile ukuphumula, ngakho-ke hlola ngaphambi uya amadili kanye nokwenzeka ehhotela olikhethile. Nutrition BB (embhedeni @ ibhulakufesi) kusho ukuthi bazonikezwa ibhulakufesi iziphuzo ezibandayo kuphela. Lokhu uhlobo ukudla lowo uyena onikezwa isikhathi yebhizinisi noma hambo. Kodwa ungakhetha BB ukudla kwamanye amahhotela ngaphandle kwalawo bahlinza isimiso «Zonke womanyano». Lokhu kukhetha ulungisiswa ezindaweni lapho lakhiwa yokudlela ibhizinisi noma labo lapho ukudla kwasemini kanye dinner ngaphandle kwehhotela ishibhile.
Amahhotela ukunikela izinhlobo ezahlukene ibhulakufesi, okukhethayo ezahlukene izitsha kanye neziphuzo. It kuncike ehhotela izwe inkanyezi, kanye ekutheni kungokwalabo BB Ihhotela, noma isigaba ezahlukene.
ibhulakufesi Continental lalivela e-Europe kanye namazwe iMedithera. Manje ubizwa yokutholwa emahhotela okuqondene inethiwekhi ngamazwe, kungakhathaliseki esifundeni. Lolu hlobo ibhulakufesi ngokuvamile ukukhanya unfussy. Kudingeka ukwethula isiphuzo esishisayo (ikhofi, itiye), khekhe fresh, ibhotela, ujamu, corn ishq. amahhotela eziningana uthanda i ibhulakufesi yezwekazi lubandakanye amaqanda imenyu, namasoseji noshizi.
Uma BB ukudla ihhotela lakho linikeza ibhulakufesi isiNgisi, okusho ukuthi ngeke kube zahlukahlukene kakhulu, kodwa okunama-kilojoule amaningi. Kubandakanya imikhiqizo okuyinto ububanzi akuvunyelwe zigcinwe eminyaka. Ngokwesiko kwasekuseni siqukethe ayi ethosiwe, ubhekeni, amakhowe, utamatisi fresh noma okusemathinini, amaqanda ethosiwe, ubhontshisi omhlophe e utamatisi sauce futhi ubhontshisi buttered. Yonke imikhiqizo kumele embondelene in ipuleti eyodwa ngendlela ethile. ikhofi Futhi bakhonza, ubisi itiye, orange juice.
Ukudla BB uhlobo American-isitayela ibhulakufesi esekelwe okuthandwa abantu baseMelika. Izitsha ezihlongozwayo Ziningi futhi kulula. Njengomthetho, it is ngiyocasha amaqanda, ikhaya ethosiwe amazambane, noma amazambane amabhola, Pancake ophaya, waffles isiraphu, okusanhlamvu ezomile, Muffin kanye ubhontshisi. izitsha main kuthiwa kwahambisana imifino nezithelo. Njengoba isiphuzo edingekayo orange juice kanye nekhofi.
Okwamanje, uhlobo ethandwa kakhulu lebhulakufesi kuyinto "lezitsha" lapho amaholide ngokwabo bathola ukudla kusukela uhla ehlongozwayo. Esikhathini amahhotela kokukhethwa ekilasini ezahlukene ukudla kanye iziphuzo ngokuyisisekelo ezahlukene.
Ezinye amahhotela uhlele extra ibhulakufesi ngasekupheleni ababebakhonza a lezitsha isisekelo. Efuna appetizers abandayo, nama-dessert, ehla, iziphuzo ashisayo nabandayo ukudla ulindele.
Iningi amahhotela ephezulu musa abanamathela uhlobo oluthile kwasemini futhi kusimangaze imenyu eziningi ezinhlobonhlobo ezilapho. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi amazwe aseNingizimu-East Asia, kanye ezincane esiqhingini uthi. Sasekuseni zithathwa ehhotela yabo, ukhetho olukhulu izitsha, kuhlanganise zemifino nezithelo salads, amasobho, izinhlobo eziningana ushizi, ham, izitsha hot of inyama, inhlanzi kanye side izitsha ngabo. Ngaphezu kwalokho, kukhona ngempela izithelo zonyaka kanye nesiphuzo fresh. Iningi izivakashi kula mazwe ukukhetha ukudla BB, ngoba kuthinta ukutholakala endaweni yokungcebeleka endaweni lenqwaba zokudla ukudla omuhle kakhulu futhi amanani emangalisayo ongaphakeme.
Ezokungcebeleka Tuapse: incazelo kanye nezithombe
Isiqedaphunga ayinaphunga: izinhlobo, abakhiqizi kanye nokubuyekeza
I izakhiwo rosehip